DFS oo ka digtay waxyeeleynta dhalinyarada ku xiran xabsiyada caalamka – idalenews.com
Muqdisho(INO)- Dowladda Federalka Somaliya ayaa ka digtay waxyeeleynta dhalinyarada Soomaaliyed ee xabsiyada caalamka ku xiran, xilli Dowladda India la sheegay inay xukun dil ah ku riday 50-dhalinyaro Somali ah.
Warka ka soo baxay Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga codsanaayo dalalka India iyo Seychelles inay hubiyaan badqabka dhalinyarada Somaliyed ee Xabsiyadooda ku xiran.
Waxa ay sheegtay Dowladda Somaliya baaritaan ay sameysay kadib inay ku ogaatay dhalinyaradaas inay ahaayeen kuwa kaluumaysato ah, islamarkaana si qaldan loo qabtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya iyo Safaaradaha Soomaaliya ay ku leedahay dalalka, Kenya, India, Iyo Jazeerada Seychelles inay hubiyaan caafimaadka iyo ammaanka dhalinyaradaasi.
Waxa kale oo ay sheegtay Dowladda inay ka codsanayso Dowladaha ay ku xiran yihiin dhalinyaradaasi Somaliyed in la cafiyo, lagana shaqeeyo sidii dalkooda hooyo dib loogu soo celin lahaa.
Ugu dambeyntii, Qoraalka ka soo baxay Dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya, xilli tacadiyo kala duwan ay la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyed ee ku xiran Xabsiyada aduunka, kuwaasi oo u baahan helida cadaalad buuxda.